Vala isikhungo, ngamaqembu amakhulu!
(121 okushiwo abanye)
Bergamo, Lombardy, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Marzio
Indlu Yeholide "I DUE SOLI"
(CIR: 016024-CIM-00069 )
Ifulethi (130 sqm) linamakamelo okulala ama-3 (imibhede eyi-6), elilodwa elinovulandi, igumbi lokuhlala elikhulu elinovulandi obheke epaki, ikhishi, amagumbi okugezela ama-2.
Izinkonzo: air conditioning, umshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, LCD TV, Wi-Fi njll
Kumaqembu abantu abangafika kwabangu-12 esakhiweni esisodwa (SATURNO) nginenye ifulethi elikhulu elifanayo elineminye imibhede engu-6 ukuze ukwazi ukubhukha eduze kakhulu futhi nidle ndawonye!
Indlu Yamaholide "I DUE SOLI" yonke ngemizuzu emihlanu !!!
Ifulethi, elithulile futhi elikhanyayo, elinepaki elikhulu elivamile, liseduze nenkaba yeBergamo, eduze nesiteshi sesitimela futhi lizungezwe izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela kanye nezitobhi zamabhasi.
KONKE NGEZINYATHELO EZIMBILI KUSUKA EPHAKATHI KWEDOLOBHA LETHU ELIHLE '.
I-I DUE SOLI itholakala eningizimu yeBergamo ( amamitha angu-500 ukusuka kuthelawayeka ), iyisiqalo esihle kakhulu sokuvakashela eMilan (1 h), Brescia (45'), Cremona (1 h), Como (1 h), Verona (1 h), Venice (2 h), Lake of Garda (1 h) kanye Lake of Iseo (1 h) kanye nezintaba eziningi Lombardy sika.
Ifulethi linamakamelo okulala ama-3 (imibhede eyi-6), elinye eline-balcony elizungezwe izihlahla, igumbi lokuhlala elibanzi eline-balcony ende ebheke epaki, ikhishi elikhulu, amagumbi okugezela ama-2 kanye negumbi elingaphansi eli-1 (ifulethi elingamamitha-skwele ayi-135, ilungele imindeni noma amaqembu).
Ifenisha ephelele futhi ihlomele futhi izici ezisanda kulungiswa: I-air conditioning egumbini lokuhlala futhi kuwo wonke amagumbi okulala ama-3, umshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, i-LCD TV, insimbi, ilineni, njll.
Ukuxhumeka kochwepheshe be-ADSL, ibhayisikili, indawo yemoto yangaphandle kanye / noma ibhokisi.
Ubuncane obungu-60 € ngenani eliphakeme lika-100 € / ngosuku (ubuncane bezinsuku ezi-3) ngokuhlanza nokushintsha ilineni masonto onke.
Inani lincike ubude bokuhlala, isevisi eceliwe kanye nenani lezihambeli.
Intela yabavakashi ayifakiwe (cishe i-1,5 - 2€ / ngosuku kubantu abangaphezu kweminyaka eyi-18)
(Izingane ezingaphansi kweminyaka emi-3 mahhala)
Amathuba okudlulisa ukusuka noma ukuya esikhumulweni sezindiza i-Orio al Serio kanye / noma ukusuka noma esiteshini sesitimela.
4.81(121 okushiwo abanye)
4.81 out of 5 stars from 121 reviews
4.81 · 121 okushiwo abanye
Kuthule, eduze nezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, ama-pizzeria namabha.
Ixhunywe ngebhasi, imizuzu emi-5 ukusuka esiteshini sesitimela nasenkabeni yedolobha kanye nezindawo eziningi zokupaka zamahhala ezizungeze isakhiwo.
I was born and live in Bergamo. Married with 2 sons, I love all sports ( football, tennis, snowboarding, sailing, windsurfing etc..) I'm information technology consultant and my fr…
Ngihlala esakhiweni esisodwa, ngakho-ke noma yini oyidingayo ngiyatholakala ...
UMarzio Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: CIR: 016024-CIM-00069
Hlola ezinye izinketho ezise- Bergamo namaphethelo